Fanakànana ny encyclopédie Wikipédia any Iran · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Aogositra 2010 9:39 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, English
Araka ny vaovao nivoaka tamin’ny teny Anglisy sy persiana tamin’ny 25 Jolay, ny tranonkala malalaka encyclopédie Wikipédia dia nosakanana any Iran ary tsy nety nidirana. Ireo mpampiasa ka nanandrana niditra tamin’ilay tranonkala dia samy nahazo ity pejy fibahanana ity avokoa milaza hoe « Mifanaraka amin’ny lalàna momba ny heloka atao amin’ny alalan’ny solosaina (heloka bevava) dia tsy afaka idirana intsony ity tranonkala ity.”
Dika sarin'ny pejy fibahanana.
Ny fanadihadiana nataoko dia naneho fa ny marainan’ny 29 Jolay, mbola azo nidirana ny tranonkala Wik ;ipedia tao Iran, saingy ilay tranonkala persiana voalaza (balatarin.com) kosa voasakana tao Iran. Ny fanakànana ny Balatarin dia vokatry ny toerany manohitra ny governemanta sy ny «anjara toerana lehibe raisiny amin’ny hetsika fanohanana ny demokrasia ao Iran», araka izay anazavany azy ao amin’ny Ny mombamomba ny pejy. Na dia «betsaka amin’ny fanimbazimbana ny zon’olombelona aza no voalohany no namoahana azy tao amin’ny Balatarian”. Noho io antony io, « imbetsaka ny governemanta Iraniana no nanakiana ny Balatarian miaraka amin’ny Facebook sy ny Twitter ho mpiray tsikombakomba nikotrika ny korontana taorian’ny fifidiana tany Iran. “
Tanisaintsika eto ohatra ny momba ny Balatarian ho toy ny fijoroana vavolombelona momba io tranga misy ao Iran io efa ho an-taona maro izao: tranonkala voasakana tanteraka ao amin’ny firenena, raha misy kosa ireo izay voasakana tsindraindray fotsiny noho ny antony manokana.
Fanampin’izay, miatrika ny zava-misy amin’ny fahasamihafan’ny politikan-tsivana atao amin’ny aterineto ireo manampahefana Iraniana. Izany dia vokatry ny fisian’ireo mpanome tolotra aterineto marobe izay nanaraka ny politikan’ny governemanta amin’ny fomba samihafa. Ka nanome sehatra ny fanakànana tranonkala any amin’ny faritra hafa. Hisorohana io olana io, ny governemanta Iraniana dia nikaroka, efa ho taona maro izao, hamorona rafitra itambarambe, mifototra amina orinasa Iraniana mpamokatra rindrambaiko, ho fananganana rafitra tokana ho fanivanana hahafahana miatrika izay mety ho tetika ara-teknolojika samihafa rehetra fanaovana lalam-poza.